News - Olee otu iji gbakọọ ma jikwaa ọkpụrụkpụ nke ihuenyo ink ebi akwụkwọ oyi akwa?
Olee otú gbakọọ na ịchịkwa ọkpụrụkpụ nke ihuenyo ebi akwụkwọ ink oyi akwa?
Ojiji obibi akwụkwọ ink na-ebi akwụkwọ:
1. Okpukpo nke ihe nkiri ihe nkiri (na-ekpebi ego nke ink). Ọ bụrụ na anyị ejiri gluu nke na-ewe ihe mmetụ iji mee ihuenyo ahụ, anyị ga-atụlekwa ọdịnaya siri ike nke mama ahụ na-eme onwe ya. Mgbe emechara foto ahụ na ọdịnaya siri ike, ihe nkiri ahụ ga-agbanwe agbanwe na ihe nkiri ahụ ga-adịwanye njọ. Yabụ anyị nwere ike iji nlele ọkpụrụkpụ iji chọpụta ogo nke ihuenyo ahụ.
2. viscosity nke ink (n'ụzọ na-emetụta ọkpụrụkpụ nke ink dee ya). Ala nke viscosity nke ink na usoro obibi akwụkwọ, ihe mkpuchi ink ahụ ga-adị njọ, n'ihi na ink n'onwe ya nwere obere ihe mgbaze, na ntụle, nke dị gịrịgịrị.
3. Ọnụ nke ihe nchacha ahụ (na-emetụta ọnụọgụ nke ink). Ọ bụrụ na agụba nke squeegee dị n'akụkụ aka nri, olu ink dị obere. Inye olu buru ibu ma oburu na odi n’akuku obtuse.
4. Nrụgide nke squeegee (na-emetụta ọnụọgụ nke ink). N'oge a na-ebi akwụkwọ, nrụgide dị ukwuu nke squeegee, ka obere ink dee ya. Ihe kpatara ya bụ na a gbapụla ink ahụ tupu atụpụchaa ya na ntupu. Kama nke ahụ, ọ dị obere.
5. Esemokwu nke ihuenyo (na-emetụta oke oghere, ọnụ ọgụgụ nke ihuenyo meshes, eriri waya, na ọkpụrụkpụ ihuenyo). N'ime usoro ịgbatị ihuenyo, ka esemokwu ahụ na-abawanye, teknụzụ teknụzụ nke ihuenyo n'onwe ya ga-agbanwe ya. Nke mbụ, ọ na-emetụta ọnụọgụ ntaneti nke ntupu waya, mgbatị ahụ dị elu, nke ka nnukwu nbelata nha ntanye (ruo mgbe mesh ahụ gbanwere kpamkpam). Na-esote, ọ ga-emetụta oghere oghere nke ihuenyo ahụ, ntupu ahụ ga-ebuwanye ibu, eriri waya ga-adịwanye njọ, akwa ntupu ga-adịwanye njọ. Ihe ndị a ga-emecha mee ka mgbanwe nke ink dee.
6. Ink ụdị (n'ụzọ na-emetụta ndị ọkpụrụkpụ nke ink oyi akwa). Anyị maara na mgbe e bipụtara ihe mgbaze dabeere na mgbaze, ihe mgbaze ga-ekpochapụ na ink ikpeazụ nke ink ga-adị njọ. Mgbe ebipụta, resin ahụ gwọrọ ozugbo ihe ọkụ ọkụ ultraviolet kpasasịrị ya, ya mere akwa ink na-agbanwe agbanwe.
7. Ihe isi ike nke squeegee (n'ụzọ na-emetụta oke nke oyi akwa ink). N’ime usoro obibi akwụkwọ, ike nke mpịda mpịakọta na-ebuli elu, nke na-adịkarịghị enwe nkwarụ, nke pere mpe nke ink, na nke ọzọ.
8. Akụkụ nke akpụcha. (N’ụzọ na-emetụta oke ọkpụrụkpụ nke ink dee ya). Mgbe ị na-ebi akwụkwọ, obere nkuku dị n'etiti squeegee na ihuenyo ahụ, ọnụ ọgụgụ ink ka ukwuu, n'ihi na mpịakọta na ihuenyo dị na kọntaktị elu. Kama nke ahụ, ọ dị obere.
9. Nrụgide nke mma-nloghachi mma (ego nke ink kpọmkwem). Ka nrụgide a na-etinye na mma na-alọta ink, nke ka ukwuu na ink, n'ihi na ntakịrị ntakịrị ink abanyela n'ime ntupu site na mma ink na-alọghachi tupu ebipụta. Kama nke ahụ, ọ dị obere.
10. Printing gburugburu ebe obibi (n'ụzọ na-emetụta ndị ọkpụrụkpụ nke ink oyi akwa). Otu okwu anyị leghaara anya bụ mgbanwe nke ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke ebe obibi akwụkwọ obibi akwụkwọ. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ nke ebe obibi akwụkwọ gbanwere nke ukwuu, ọ ga-emetụta ink n'onwe ya (dịka ink viscosity, agagharị, wdg).
11. Ihe eji ebi akwụkwọ. (Kpọmkwem na-emetụta ọkpụrụkpụ nke ink oyi akwa). The flatness nke mkpụrụ elu ga-emetụta ọkpụrụkpụ nke ink oyi akwa, na ike ike n'elu ink ga seep si (dị ka ikpa isi, akpụkpọ anụ, osisi). Ihe megidere ya ka ukwuu.
12. Ọsọ nke ibi akwụkwọ (n'ụzọ na-emetụta ọkpụrụkpụ nke ink ink). Ngwa-ngwa nke ibipụta akwụkwọ, ọ ga-eme ka ink dee ya obere. Ebe ọ bụ na ink edozichaghị ihe ndị ahụ eji eme ihe, a na-apịpụta ink ya, na-eme ka ihe ink ahụ kwụsị.
anyị maara na ọ bụrụ na otu njikọ gbanwere n'oge a na-ebi akwụkwọ, ọ ga-emecha duga olu ink na-ekwekọghị ekwekọ. Kedu ka anyị kwesịrị isi gbakọọ ọkpụrụkpụ nke oyi akwa ink? Otu ụzọ bụ tụọ ịdị arọ nke ink mmiri ahụ. Nke mbụ, gbalịa idobe njikọ ọ bụla na mbipụta ahụ agbanweghị. Mgbe ebipụtachara, tụọ ịdị arọ nke mkpụrụ ahụ, wee wepụzie nke mbụ nke mkpụrụ ahụ. Ihe data nwetara bu nke ink mmiri. Maka ibu, usoro ọzọ bụ iji tụọ ọkpụrụkpụ nke ink ink. Jiri ọkpụrụkpụ nlele tụọ ọkpụrụkpụ nke mkpụrụ mgbe ekpuchi ink, wee wepụ nke mbụ ọkpụrụkpụ nke mkpụrụ. Ihe data nwetara bu ọkpụrụkpụ nke oyi akwa ink.
Etu esi ejikwa ọkpụrụkpụ nke oyi akwa ink na-ebi akwụkwọ usoro nke ngwa nbipute ihuenyo aghọwo nsogbu nke ndị na-ebipụta ihuenyo na-eche ihu. Ihe mbu anyi gha eme bu iji ngwa oru di ugbu a mee ihe iji gosi na izi ezi nke ihe ndi a choro; Factorylọ ọrụ ahụ nwere ike iji igwe mkpuchi akpaka iji mezue usoro gluing iji hụ na ọkpụrụkpụ nke mama gluu. Ihe ọzọ ị ga - eme bụ iji hụ na njikọ ọ bụla na ime efere na ibipụta akwụkwọ anaghị agbanwe agbanwe ka o kwere mee. Ekwesiri ịdebanye ederede ederede ọ bụla iji nye ezigbo data maka ịchọta oke mkpuchi oyi akwa, nke mere na ngwa nbipute ihuenyo nwere ike ibipụta nke ọma.
Igwe Mbipụta Igwe, Ihuenyo Silk Printing Machine, Silk Screen Printing Machine, Silkscreen Printing Machine, Akpaaka Screen Printing Machine, Glass Screen Printing Machine,